NABADGELYAHU WAA LAGA HELI KARAA DHAMMAHA - Dunida Maarso
Home » Noticias » Qoraalada saxaafadda » NABAD WUXUU KUU SAMEEYEY DHAMMAAN
28 / 03 / 2020 15 / 03 / 2020 by Antonio Gancedo
Sidee qof uga hadli karaa nabada inta hubka sii kordhayaa la dhisayo ama takooriddu waa xaq?
"Sideen nabad uga wada hadli karnaa annagoo dhisi doonna hub cusub oo dagaal oo aan muuqan?
Sideen uga hadli karnaa nabada anagoo u cadeynayna ficillada qaarkood ee kicinta leh hadalada takoorka iyo nacaybka? ...
Nabadda waa uun ereyada dhawaaqa, haddii aan lagu saleysneyn runta, haddii aan loo dhisin si caddaalad ah, haddii aan la degdegin oo lagu dhammeeyo sadaqo, iyo haddaan lagu helin xorriyadda "
(Pope Francis, khudbaddii Hiroshima, Noofambar 2019).
Bilowga sanadka, ereyada Francis waxay noo horseedaan inaan ka fikirno dadka masiixiga ah kuna saabsan ballanqaadkeena maalinlaha ah ee ku aaddan dhisidda nabadda adduunka aan ku nool nahay iyo xaqiiqda noogu dhow: Galicia.
Waa run in aan ku nool nahay meel muhiim ah horteeda malaayiin qof oo adduunka ah. Si kastaba ha noqotee, nabadgalyadaan muuqda ayaa ah mid qulqulaya waxayna jabin karaan waqti kasta.
Kalabar reer Galyaas waxay ku noolaadaan faa iidooyinka bulshada: hawlgabyada iyo kabitaannada (Codka Galicia 26-11-2019).
Dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Chile, oo ka mid ah waddamada ugu barwaaqada badan Koonfurta Ameerika, waxay ka digayaan nugulnaanta bulshooyinka loo yaqaan daryeelka.
Rabshadaha jinsiga ee sanadkaan si gaar ah ugu adkeeyay dhulkeenna, nacaybka, khaniisiinta iyo hadalada nacaybka cusub ee kooxaha siyaasada qaarkood, xitaa iyada oo la ilaalinayo diinta diinta masiixiga, ayaa ah astaamo muujinaya in nabada aan xasilloonayn.
MAXAAN KA QARAN KARAA?
Si loo gaaro jawi nabadeed, waxaa lama huraan ah in dhammaan xubnaha wadajirka ah ee dadku ay ku soo biiraan mashruuca dhisidda nabadda hareerahooda. Ma fududa in laga gudbo iskahorimaadka, la waafajiyo danaha iskahorimaadka ah, dib-u-habeeynta unugyada oo aan u kala eexan.
Asalka waa waxbarasho nabadeed oo ka timaadda qoysaska iyo gaar ahaan dugsiga, halkaas oo kiisaska u xoogsheegashada iyo xadgudubka sanad walba ay ku koraan.
Waxbarista carruurta iyo wiilasha xallinta khilaafaadka iyada oo aan nacayb iyo rabshad la aan la hor keenin waa arrin weli laga sugayo waxbarashada.
Mid ka mid ah sababaha xasillooni darrooyinka ka jira waddamo badan ayaa ah sicir bararka meesha ku jira
quusteen inbadan oo aduunka kamid ah. Kaliya maaha kaliya waxyeelada dabiiciga ah ee badeecada xad dhaafka ah laakiin waxay ku saabsantahay saboolnimada iyo addoonsiga malaayiin dad ah.
Dagaallada ka dambeeya Afrika waxaa ka jira dano ganacsi oo waaweyn, iyo dabcan iibinta iyo ka ganacsiga hubka. Isbaanishka kuma cusba xaaladdan. UN-na sidoo kale ma aha, maadaama 80% iibka hubka ay ka yimaadaan wadamada xubnaha ka ah Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay.
Kharashaadka adduunka ee hubka (2018) wuxuu ahaa kii ugu sarreeyay 30-kii sano ee la soo dhaafay (1,63 tiriliyan euro).
Pope Francis ayaa u yimid inuu ka dalbado UN-ka inay xaq u yeeshaan diidmada qayaxan ee Golaha Amniga ee 5ta awoodood la waayo.
Sidaa darteed waa inaan ku nuuxnuusano mas'uuliyadda iyo isticmaalka miyir-qabka, innagoo baabi'ineyna waxyaabaha aan loo baahnayn, door bididda ganacsiga dabiiciga iyo tamarta waarta Kaliya sidan ayaan u joojin doonaa burburka meeraha iyo qalalaasaha ka dhashay waxsoosaarka duurjoogta ee dalal badan.
Synod-kii ugu dambeeyay ee Amazon, oo lagu qabtay magaalada Rome bishii Oktoobar ee la soo dhaafay, wuxuu ku baaqay siyaasado cusub oo difaaca dhulalka halista ku jira iyo dadka deggan.
Iimaankeenna ku saabsan Xoreynta Ciise ma joojin karno dagaalka aan kula jirno dadaallada lagu badbaadinayo Abuurista.
POLA PEZ EE II-MARAYKAN POLA PEZ IYO BILAASH-MUQAAL
Oktoobar 2, 2019, ayaa ah bisha 2-aad ee Maarso Nabadda iyo Rabshadda iyo Rabshadaha oo ka bilaabmay magaalada Madrid, kaasoo raadinaya isku-duubnaan caalami ah oo ku aaddan dadaallada bulshooyinka kala duwan iyo dhaqdhaqaaqyada iyagoo door bidaaya ujeeddooyinka soo socda:
Taageer heshiiska mamnuucida hubka Niyukliyerka sidaas darteedna tirtir suuragalnimada musiibo caalami ah adoo u qoondaynaya agabkiisa baahiyaha bina aadamka.
Ka tirtir gaajada meeraha.
Dib-u-habeynta UN si ay u noqdaan gole caalami ah oo nabadeed oo run ah.
Ku dhammaysti Bayaanka Xuquuqda Aadanaha waraaq loogu talagalay Dimuqraadiyadda Caalamka.
Samee qorshe Tallaabooyin looga soo horjeedo supremacism iyo takoorid ku saleysan jinsi, dhalasho, jinsi ama diin.
Wax ka qabashada isbedelka cimilada.
Kor u qaadida firfircoonaanta falgalka si markaa wadahadalka iyo wadajirka u noqdaan xoogagga beddelaya ka dhanka canshuuraha iyo dagaalka.
Ilaa iyo maanta 80 wadan oo saxeexay dhamaadka hubka nukliyeerka, 33 ayaa ogolaaday 17 ka mid ahna wali waa la saxeexanayaa. Maarso ayaa ku dhamaanaysa magaalada Madrid 8da Maarso, 2020, maalinta haweenka aduunka.
Haddaba, mid walbaa gacantiisuu kujiraa inuu ku biiro ruuxa quduusnimada ee kudhaqan adduunka oo dhan.
Kuma filna in Ilaah la jeclaado oo aan sanam caabudin, maahan in la dili karo, ha xadin ama ha marag been ah.
Bilihii ugu dambeeyay waxaan aragnay sida rabshaduhu uga qarxeen meela badan oo adduunka ka mid ah: Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Chile, Colombia, Spain, France, Hong Kong ... Farsamaynta wadiiqooyinka wadahadalka iyo nabadeynta waa howl deg deg ah oo u baahan dhammaanteen.
"Nagasaki iyo Hiroshima waan tukanayay, waxaan la kulmay qaar ka mid ah badbaadayaasha iyo ehelka dhibanayaasha waxaanan ku celiyay cambaareynta adag ee hubka nukliyeerka iyo munaafiqiinta ah ee ka hadalka nabada, dhismaha iyo iibinta hubka (...) Waxaa jira dalal Masiixiyiin ah, dalal yurub ah oo ka hadla nabadda ka dibna ku noolaada gacmaha "(Pope Francis)
DIIWAANKA CAAFIMAADKA EE 2019/20
Saxiixan: Isuduwaha Crentes Galeg @ s
Hawlihii ugu dambeeyay ee El Dueso iyo Berria